PT APTT TT FIB - Coagulation Rapid Reagent Kit-Pfungwa Yekutarisira Kuedza-Sinocare
[email inodzivirirwa] Iyo APTT / PT / TT / FIB Reagent Kit inoitirwa kuyera iyo yakaomeswa chikamu chetromboplastin nguva (APTT), prothrombin nguva (PT), nguva yeprombombin (TT) uye nekuyera inosarudza fibrinogen (FIB).
Kiriniki, inonyanya kushandiswa kuongorora kushomeka kwemukati uye kwekunze kwe coagulation system, kuratidza zvirimo kana chimiro chisina kujairika cheplasma fibrinogen uye iko kusanzwisisika mu fibrinolytic system. Iyo inogona zvakare kushandiswa kune yekubatsira kuongororwa kwekuparadzirwa kweiyo intravascular coagulation uye yepakutanga fibrinolysis, kuongorora yekurapa anticoagulant kurapwa, heparin anticoagulant therapy uye thrombolytic therapy.
Yakagadziriswa chikamu chetromboplastin nguva (APTT) bvunzo yekuongorora yekutsvaga kwemukati coagulation zvinhu. Inogona kushandiswa kuona kushomeka kune izvo zvakagarwa nhaka kana zvakawanikwa zvinhu (VIII, IX kana XI) kana kuona kuvepo kwayo kunoenderana inhibitors. APTT inogona zvakare kushandiswa kuratidza kushomeka kwe coagulation XII, prokallikrein uye yakakwira mamorekuru uremu kallikrein. APTT ndiyo yakasarudzika chiyero chekutarisa isina kujeka heparin.
Kiriniki, nguva yeprothrombin (PT) inonyanya kushandiswa kuongorora kushomeka kwekunze kweiyo coagulation system uye kuongorora kwekurapa anticoagulant kurapwa. Neyakareba PT, panogona kuve nekugara nhaka chinhu II, V, VII, X kushomeka uye hypofibrinemia (kana afibrinogenemia); Iko kushomeka kweakawanikwa coagulation factor inowanikwa muDIC, yekutanga fibrinolytic kusagadzikana, inopinga jaundice vhitamini K kushomeka; ne PT yakapfupikiswa, panogona kunge paine nhaka yechinhu V yakawandisa, zvekudzivirira pamuromo, hypercoagulability uye zvirwere zveprombotic.
Thrombin nguva (TT) bvunzo yekuongorora kuti uwane kugona kwe plasma fibrinogen inoshandura kuita fibrinogen. Neyakareba TT, panogona kuve nekuwedzera heparin, kuvepo kweakawanda heparin anticoagulant, senge hepatopathy, hosha dzeitsvo, nezvimwe; hypofibrinemia (kana afibrinogenemia), isina kujairika frinogenemia, yakawedzera FDP, senge DIC, primary fibrinolysis, nezvimwewo. Neyakafupiswa TT, panogona kunge paine tumaganda tudiki cheropa kana Ca + muropa sampuro.
Yakakwidziridzwa fibrinogen (FIB) inowanzo kuwanikwa muropa rakagwamba, iro rinoonekwa mune vane chirwere cheshuga vane chirwere chevascular, kana varwere vane acute myocardial infarction, chirwere checebrovascular, uye nhumbu inokonzerwa neBP. Consptive coagulopathy kana fibrinolysis), chirwere chekutanga chefibrinolytic, zvakakomba hepatitis, hepatic cirrhosis, nhaka yehofofibrinemia (kana afibrinogenemia), nezvimwe.
Liquid phase reaction system, uchishandisa nzira yekugwamba inotungamira kune chaiyo mhedzisiro
Mhedzisiro inowanikwa mune 15 maminetsi